Mobiles iri kacha arụ ọrụ nke Ọgọst 10 | Androidsis
Dị ka ọ na -adị, AnTuTu na -eme akụkọ kwa ọnwa ma ọ bụ, kama nke ahụ, ndepụta nke ọdụ kacha ike n'ahịa, kwa ọnwa. Yabụ, n'ime ohere ọhụrụ a, anyị na -egosi gị ọnwa dị iche iche nke ọnwa Julaị, nke bụ nke ikpeazụ site na njiri mara wee kwekọọ n'ọnwa Ọgọstụ a. Ka ahụ!
1 Ndị a bụ mobiles kachasị elu nwere arụmọrụ kacha mma nke August
3 Xiaomi Black Shark 4 Pro, mkpanaka nwere arụmọrụ kacha mma niile
Ndị a bụ mobiles kachasị elu nwere arụmọrụ kacha mma nke August
E gosipụtara ndepụta a n'oge na-adịbeghị anya, ma, dị ka anyị si pụta ìhè, bụ nke July gara aga, mana ọ na -emetụta n'ọnwa Ọgọst ebe ọ bụ na ọ bụ ọkwa kacha ọhụrụ na nso nso a, yabụ AnTuTu nwere ike inye nke a ntụgharị n'ọkwa ọzọ nke ọnwa a, nke anyị ga -ahụ na Septemba. Nke a bụ ekwentị kachasị ike taa, dị ka usoro nnwale si dị:
Dịka enwere ike ịkọwapụta na ndepụta ahụ anyị tinye n'elu, na Black Shark 4 Pro na Red Magic 6 Pro bụ anụ ọhịa abụọ ndị dị na ọnọdụ abụọ mbụ, nwere isi 854.439 na 831.163, n’otu n’otu, na onu ogugu enweghi nnukwu onu ogugu n’etiti ha. Igwe ndị a nwere igwe eji agagharị agagharị Qualcomm si Snapdragon 888.
Onye nke atọ, nke anọ na nke ise nwere OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro na realme GT, nke nwere 822.338, 818.309 na 808.852, n’otu n’otu, imechi ebe ise izizi na ndepụta AnTuTu.
Iji mechaa, ọkara nke abụọ nke tebụl mejupụtara OnePlus 9 (807.935), Vivo X60 Pro Plus (806.746), iQOO 7 (806.625), Meizu 18 (790.387) na Xiaomi Mi 11 Ultra (787.450), na otu n'usoro, site na isii ruo ebe iri.
Mgbe Xiaomi Mi 11 Lite 5G, nke jisiri ike gosipụta ọnụ ọgụgụ dị elu nke 531.960 ma na-akwado Mediatek's Dimensity 820, Honor 50 Pro, nke Snapdragon 778G na-akwado, nọ n'ọnọdụ nke abụọ, yana akara nke 507.095 . Nke a na-esote Honor 50, yana akara nke 505.637. Nke ikpeazụ a na - arụ ọrụ na Snapdragon 778G.
Oppo Reno6 5G, Redmi 10X 5G na realme Q3 Pro enwetala ọnọdụ nke anọ, nke ise na nke isii., n'otu n'otu, na ọnụ ọgụgụ 480.420, 451.863 na 450.945. Oppo K9 5G nọ n'ọkwa nke asaa, nwere akara nke 450.024 isi.
IQOO Z3 na Huawei Nova 8 Pro nọ n'ọkwa nke asatọ na nke itoolu, na 443.120 na 438.624, n'otu n'otu. Nke mbụ bụ ama nke nwere Kirin 985 dị ike, ebe nke ikpeazụ kwukwara na sistemụ na mgbawa. Ndị Huawei Nova 8, na Kirin 985 na ihe 431.250 a na-enweghị ike icheta echepụtara na nyocha ahụ, ọ bụ smartphone ikpeazụ na ndepụta AnTuTu.
Xiaomi Black Shark 4 Pro, mkpanaka nwere arụmọrụ kacha mma niile
Ugbu a iji mechaa ma nye ya nzere kwesiri ekwesi Xiaomi Black Shark 4 Pro N'ihi na ọ na-aga n'ihu na-eduzi ogo AnTuTu, anyị ga-ekwu maka njirimara na nkọwapụta nke kachasị ike nke oge a na-anya isi, dị ka elu nke njedebe na arụmọrụ kacha mma ruo 2021 a.
Black Shark 4 Pro bụ ama egwuregwu raara onwe ya nye nke nwere ihuenyo teknụzụ 6.67 inch Super AMOLED nwere mkpebi FullHD + nke pikselụ 2,400 x 1,080 yana akụkụ nke 20: 9. N'aka nke ya, ihuenyo a nwere oke ume ọhụrụ nke 144 Hz, HDR10 yana ncha kacha nke nits 1,300.
Ngwaọrụ a dị elu na-eji nhazi Qualcomm Snapdragon 888, chipset na-ebi n'obi ya ma nwee ike iru oke elekere elekere 2.84 GHz, na mgbakwunye na ọ bụkwa isi asatọ na inwe Adreno 660 GPU. N'aka nke ya, a na-egosi ngwaọrụ ahụ n'ọtụtụ ụdị, nke ha nwere ike bụrụ 8, 12 ma ọ bụ 16 GB na 256 ma ọ bụ 512 GB nke ebe nchekwa dị n'ime. N'ezie, enweghị nkwado maka mgbasawanye site na microSD.
Ọnụ ọdụ a nwere batrị nke Ike 4,500 mAh nke na -akwado teknụzụ chaja ngwa ngwa 120 watt.
Atụmatụ ndị ọzọ nke ekwentị a gụnyere sistemụ jụrụ oyi dị elu ruo ọtụtụ awa egwuregwu, onye na -agụ akara mkpisi aka n'akụkụ aka nri, sistemụ arụmọrụ gam akporo 11 nwere MIUI 12.5 nkeonwe, NFC maka ịkwụ ụgwọ enweghị kọntaktị (enweghị kọntaktị), ntinye 3.5 jaak maka ekweisi na ndị na -ekwu okwu stereo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Mobiles iri kacha arụ ọrụ nke Ọgọst 10